အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းပြီး အသည်းယားစရာကောင်းတဲ့ ပုံလေးတွေကို ချပြလိုက်တဲ့ ရွှေမှုံရတီ - Zeekwat Hot News
အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းပြီး အသည်းယားစရာကောင်းတဲ့ ပုံလေးတွေကို ချပြလိုက်တဲ့ ရွှေမှုံရတီ
August 12, 20190975
လူငယ်ပရိသတ်များကြား အတော်လေး ရေပန်းစားသလို ထိပ်တန်းမင်းသမီးတစ်ဦးအဖြစ်ပါ တဖြည်းဖြည်း အောင်မြင်လာတဲ့ ရွှေမှုံဟာ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အောင်မြင်ကျော်ကြားသူတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့ သီဆိုထားတဲ့ “အမှား” ဆိုတဲ့ သီချင်းကလည်း အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။
လတ်တလောကပဲ ရွှေမှုံရဲ့ “ချစ်တယ်” ဆိုတဲ့ Music Video လေး ထွက်ရှိခဲ့ပြီး အဆိုပါ သီချင်းလေးကလည်း အောင်မြင်မှုများစွာ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ Music Video လေးမှာ ရွှေမှုံတစ်ယောက် အတော်လေး ချစ်ဖို့ကောင်းနေပြီး သီချင်းထဲက ပုံရိပ်လေးများကိုလည်း သူမကိုယ်သူမ ပြန်ပြီး သဘောကျနေခဲ့ပါတယ်။
ရွှေမှုံက “အသည်းယားလို့ သိမ်းထားလိုက်မယ်…………….?” ဆိုပြီး သီချင်းထဲက ပုံလေးများကို သူမရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်မှာ တင်ခဲ့ပါတယ်။ တနေ့ကပဲ ရွှေမှုံက ခင်ပွန်းသည်နဲ့အတူ တေးသီချင်းလေးများ လုပ်ဖြစ်နေပေမယ့် နေမကောင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ချစ်သူဘ၀ကတည်းက တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး surprise လေးများ လုပ်ဖြစ်ကြပြီး ရိုလွန်းတဲ့ ပုံလေးများကို မြင်တွေ့ရသလို အိမ်ထောင်ကျပြီးနောက်မှာလည်း ချစ်သူလေးတွေလို ယုယုယယနဲ့ မြင်တွေ့ရတာကြောင့် ပရိသတ်များက အရိုနိုင်ဆုံးနဲ့ ချစ်စရာအကောင်းဆုံး စုံတွဲလေးအဖြစ် အမြဲတမ်း သဘောကျနေခဲ့ကြပါတယ်။
လူငယျပရိသတျမြားကွား အတျောလေး ရပေနျးစားသလို ထိပျတနျးမငျးသမီးတဈဦးအဖွဈပါ တဖွညျးဖွညျး အောငျမွငျလာတဲ့ ရှမှေုံဟာ ငယျငယျရှယျရှယျနဲ့ အောငျမွငျကြျောကွားသူတဈဦး ဖွဈပါတယျ။ ခငျပှနျးဖွဈသူနဲ့ သီဆိုထားတဲ့ “အမှား” ဆိုတဲ့ သီခငျြးကလညျး အောငျမွငျခဲ့ပါတယျ။
လတျတလောကပဲ ရှမှေုံရဲ့ “ခဈြတယျ” ဆိုတဲ့ Music Video လေး ထှကျရှိခဲ့ပွီး အဆိုပါ သီခငျြးလေးကလညျး အောငျမွငျမှုမြားစှာ ရရှိခဲ့ပါတယျ။ Music Video လေးမှာ ရှမှေုံတဈယောကျ အတျောလေး ခဈြဖို့ကောငျးနပွေီး သီခငျြးထဲက ပုံရိပျလေးမြားကိုလညျး သူမကိုယျသူမ ပွနျပွီး သဘောကနြခေဲ့ပါတယျ။
ရှမှေုံက “အသညျးယားလို့ သိမျးထားလိုကျမယျ…………….?” ဆိုပွီး သီခငျြးထဲက ပုံလေးမြားကို သူမရဲ့ဖစျေ့ဘှတျပျေါမှာ တငျခဲ့ပါတယျ။ တနကေ့ပဲ ရှမှေုံက ခငျပှနျးသညျနဲ့အတူ တေးသီခငျြးလေးမြား လုပျဖွဈနပေမေယျ့ နမေကောငျးဖွဈခဲ့ပါတယျ။
ခဈြသူဘဝကတညျးက တဈဦးနဲ့တဈဦး surprise လေးမြား လုပျဖွဈကွပွီး ရိုလှနျးတဲ့ ပုံလေးမြားကို မွငျတှရေ့သလို အိမျထောငျကပြွီးနောကျမှာလညျး ခဈြသူလေးတှလေို ယုယုယယနဲ့ မွငျတှရေ့တာကွောငျ့ ပရိသတျမြားက အရိုနိုငျဆုံးနဲ့ ခဈြစရာအကောငျးဆုံး စုံတှဲလေးအဖွဈ အမွဲတမျး သဘောကနြခေဲ့ကွပါတယျ။
တောင်ပြိုကျမှုမှာ သူတစ်ယောက်ထဲလုပ်တယ်ဆိုပြီး ၀င်ဖောတဲ့ “နှမ်းဖြူး” ဆိုပြီး အနုပညာရှင်တစ်ဦးကို ဒဲ့ဆော်လိုက်တဲ့ ပရဟိတသမားတစ်ဦး